Hadoop အုပ်ချုပ်ရေး - တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန် - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
Hadoop အုပ်ချုပ်ရေး - တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
မဟုတ်5နှစ်အတွင်းမှာတော့ Hadoop တစ်ဦးတည်းကမ္ဘာကြီးကိုအချက်အလက်များ၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးကို process ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါနည်းပညာအသစ်ပူဖြစ်ပြီး, ကုမ္ပဏီများ Hadoop လက်မှတ်ရှိသည်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏အရေးပါသောလိုအပ်ချက်၌ရှိကြ၏။
အဆိုပါဂျာဗားပရိုဂရမ်စနစ်က Hadoop ရိုးရှင်းစွာ Open-source ကိုနှင့် PC ကိုအခွအေနေအတွင်း၌တွေ့ရှိသောပိုကြီးပြီးကြီးမားတဲ့ data တွေကိုအစုံပြင်ဆင်နေများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ Hadoop ကဲ့သို့ဒေတာ, ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပြင်ဆင်နေများအတွက်ကျိုးနွံဆာဗာများကိုအသုံးပြုသည်နှင့်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းများအတွက်မော်ဒယ်ဆီသို့အမှီအဖြစ်။ အဆိုပါပရိုဂရမ်မူဘောင်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေဒေတာ, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု, ဒေတာဒေသသည်ပိုမိုကြီးမားအချက်အချာခိုင်၏ထောက်ခံမှုနှင့်တစ်ဦးအလိုအလျှောက်လမ်းအတွက် failovers ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏ optimization အမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများပြင်ဆင်နေအပြိုင်ထည့်သွင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များ။
အဆိုပါ Hadoop အုပ်ချုပ်ရေးမူဘောင်၏2အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ MapReduce နှင့် HDFS ထည့်သွင်း။ Hadoop သေးငယ်တဲ့ဒေတာကိုအထုပ်သို့မဟုတ်ဖုသို့တစ်ခုချင်းစီကိုတိုးတက်သော data တွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း partitions နှင့်ဤဒေတာ packets တွေကိုပုအချက်အချာအဆိုပါအုပ်စုများအတွင်း၌တည်ရှိသောခံရ, လွတ်လပ်သောနှင့်ကွဲပြားခြားနားအချက်အချာအတွင်းပိုင်းပယ်ရှားနေကြသည်။ Hadoop ကျွမ်းကျင်အတော်လေးအချိန်နှင့်စက်ဝိုင်း၏မှတ်ဉာဏ်ပေါ်သို့ကြီးမားသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဒေတာကိုပယ်ရှား၎င်း၏အချိန်ကာလသည်အလွန်သေးငယ်သည်။ Hadoop လည်းအုပ်စုအတွင်း၌တည်ရှိသောနှင့်လုပ်သောထပ်တူများကိုအဆိုပါပွားအချက်တိုက်ရိုက်အတိုင်းအတာထဲမှာဖြစ်ကြ၏ရသောကွဲပြားခြားနားသောစက်ပေါ်မှာရှိသမျှဒေတာ replicates ။ အမျိုးမျိုးသော data တွေကိုထပ်တူများကိုအလွယ်တကူတစ်ချိန်တည်းမှာကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့, data ကိုကိုင်တွယ်အချိန်လျှော့ချရောက်လာပါတယ်။
Hadoop လက်မှတ်အရှင်သငျသညျတခုအဖှဲ့အစညျး၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်များအတွက်ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်အသုံးချနိုင်သည်ကိုပြသသည်။ ကုမ္ပဏီများသင် Big Data ကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားမှာယူဘို့စံပြဖြစ်ကြောင်းဘူးသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်စွမ်းရည်ပြသသောထို Hadoop လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများစဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေရေးအတွက်ယနေ့ဖြစ်ကြ၏။
အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက် Hadoop လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး?
Hadoop ကြီးမား data တွေကိုကိုင်တွယ်၏နည်းလမ်းသစ်ဖြစ်ပြီး, Hadoop အာမခံပညာရှင်များအာမခံ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဘဏ္ဍာရေး, လက်လီ, တက်ကြွခြင်းနှင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း segments များနှင့်ဒေါင်လိုက်အတွက်လိုအပ်သည်။ Hadoop များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအလွန်တရာထိရောက်သောခဲ့နှင့်နည်းပညာအသစ်ထားရှိရန်အဖြစ်ဤမျှလောက်များစွာသောအိုင်တီပညာရှင်များမိမိတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားကြသည်။ Hadoop လက်ရှိ Mainframe အတွက်, Java နဲ့ဒေတာသိုလှောင်ရုံကျော်မျက်နှာသာနှင့်ကြွလာအနာဂတ်အတွက်သစ်ကိုမူဘောင် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြင်ဆင်နေဆီသို့ဦးတည်ကျောင်းအုပ်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါလက်မှတ်ဝယ်လိုအားနှင့်ကုမ္ပဏီများကတက်ကြွစွာအလွန်အရေးကြီးသည် Hadoop လက်မှတ်နှင့်စွမ်းရည်ရှိသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေကြသည်။
အဆိုပါ Hadoop လက်မှတ်ကိုသင်လစာနှင့်အနေအထားတောင်တက်နှစ်ဦးစလုံးသဘောဆောငျ, သင်ထိထိရောက်ရောက်သင်တန်းဖြတ်သန်းပြီးနောက်အခြားသူတွေထက်ပိုပြီးဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Hadoop မူဘောင်နှင့်အခွအေနအေအသစ်သူတို့သည်လက်မှတ်သွားတော်နှင့်ကမူဘောင်နှင့်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှမွေးစားဆီသို့ဦးတည်ကြာနှင့်သတင်းအချက်အလက်အဘယျသို့ရနိုငျပါ။
သင်တန်းကို real-time သည်နှင့်သင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်အခြေအနေများနှင့်အချက်အလက်ကိုင်တွယ်အားပေးသကဲ့သို့, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုသင်မှာပါတဲ့ဒေသများရှိပါဝင်ပတ်သက်မှု, ကိုယ်လက်ဆင်းရှိသည်ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Hadoop လက်မှတ်သင်တန်း, လေ့ကျင့်သင်ကြားခွင့်အာဏာများနှင့်သင်တန်းပို့ချအတည်ပြုခဲ့သည်ကစီစဉ်ခြင်းနှင့် imparted ကြောင်းအွန်လိုင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သင်တန်း 30 နာရီဝန်းကျင်ပါဝင်သည်။ သင်သင်တန်းကိုသင်ယူရန်ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်တွင်ထိုအချိန်ကာလဆီသို့ဦးတည်အချို့အလိုက်အထိုက်နေတတ်ရပေမည်။ သငျသညျကိုလညျးတာဝန်တွေယူရပါလိမ့်မယ်, နှင့်စစ်မှန်သောဘဝအမှုအကူအညီများကိုသင်လက်ရသောစစ်မှန်သောကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းပိုက်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်မှု concentrates ။ တစ်ဦးသင်တန်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသောအထူးကုထံမှဖြောင့်လာအားကောင်းအွန်လိုင်း 24 *7ရရှိနိုင်သငျသညျယဇျပူဇျောပါမညျသကဲ့သို့, သင်တန်းသင်ယူခြင်းအတွက်လိုအပ်သည့်အလွန်နည်းပါးဒုက္ခရှိပါသည်။ သငျသညျလညျးသငျလမ်းညွှန်ဖြန့်ဝေအပြန်အလှန်ပျော်မွေ့နှင့်အခြားသူများ၏တွေ့ဆုံထံမှရရှိမှုအနေဖြင့်သင့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ဝေမျှနိုင်မည့်ဆွေးနွေးမှုများရယူသုံးပါ။ အပြင်ကဤအားသာချက်များနှင့်သင်တန်းသင်ယူမှုအကြိုးကြေးဇူးမြားထံမှကသင်သည်လည်းအဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်သင် Hadoop စပ်လျဉ်းနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူရင်ပေါင်တန်းနေဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောသင်ယူခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်, access ။
အဆိုပါ Hadoop လက်မှတ်သင်တန်းအားဖြင့်လုံခြုံအဓိကဘာသာရပ်များနှင့်အပြင်အဆင်များပါဝင်:
Hadoop နှင့် Big Data ဗိသုကာ
အဆင့်မြင့် HBase နှင့်အုံ
Hadoop နှင့် Oozie တိုးချဲ့
Apache ကို Spark ၏အသုံးချခြင်းဖြင့်အချက်အလက်များ၏ processing နှင့်စောင်ရေ
အွန်လိုင်းပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းသင့်ရဲ့ PC မှာမူဘောင်အတွင်း virtual machine-Up ထားမည်နှင့်ဒေသခံ access ကိုနှင့်အတူသငျသညျပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ LMS သို့မဟုတ်သင်ယူသည်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုသင်သင်တန်းကိုတွေ့ကြုံခံစားသင့်ကြောင်းအပေါငျးတို့သဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများသင်တန်း၏ finish ကိုမှာသငျသညျမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်သင်ကအမှန်တကယ်အချိန်အတွက် Big Data အပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေဘို့အုံ, ဝက်, MapReduce နှင့် HBase နဲ့တူဗိသုကာသဲမူဘောင်အသုံးချဖို့ပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများစက်မှုလုပ်ငန်း-အထူးသဖြစ်ကြပြီးမီဒီယာ, လေကြောင်း, လက်လီ, ဘဏ္ဍာရေး, နှင့်အခြားသူများအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဧရိယာနှင့်ပတ်သက်သောနေကြသည်။
အဆိုပါ LMS အတွင်းပိုင်းပယ်ရှားနေကြသည်လူအပေါင်းတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းနှင့်သင်တန်းများ session တစ်ခုအဖြစ်, သင်အတန်းမဆို၏ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားမည်မဟုတ်ပါနှင့်သင်ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ အပြင် LMS မှစ. , တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအစည်းအဝေးများလည်းထူးခြားတဲ့သုတ်ဘို့အထပ်အတန်းကို run သင်အောက်ပါလိပ်စာသို့မဟုတ်လူတန်းစား session တစ်ခုအတွက်လွဲချော်ဘူးသောဘာသာရပ်များသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Hadoop အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဆီသို့ဦးတည်မရှိလိုအပ်ချက်များကိုနေစဉ်, သင် SL နှင့် Core Java ကိုသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ် သာ. ကောင်း၏။ သင့်အနေဖြင့်ဂျာဗားကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်အခြားယာယီသင်တန်းလာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုတက်တိုက်နိုင်ပါတယ်။
သင်အွန်လိုင်းသင်တန်း join ဖို့နဲ့ထိရောက်စွာသင်ယူဖို့ i4 Processor ကို (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဆင့်မြင့်) တို့နှင့်အတူ, RAM ကိုအနည်းဆုံး3GB ကိုအတူ PC ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သင်မူဘောင်လိုအပ်၏တစ်ခုခုကိုအောင်မြင်ရန်ရန်ပျက်ကွက်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်လည်းသင်၏အအောင်လက်မှတ်အခြေခံအုတ်မြစ်အားဖြင့် Hadoop အုပ်စုတစ်ဝေးလံခေါင်သီ access ကိုပေးထားနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် Hadoop သင်တန်းသင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်သနည်း
သိသိသာသာအရွယ်အစား၏ MNCs အပါအဝင်ကမ္ဘာ၏ကုမ္ပဏီများ, အကောင်းဆုံးအိုင်တီသူတို့အသုံးချသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်ရှိသည်သောအချက်အလက်များ၏ပမာဏစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူပညာရှင်များလိုပါတယ်။ အဆိုပါဒေတာအရွယ်အစားအလွန် overpowering ဖြစ်ကထဲကအတိအကျနှင့်ညာဘက်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုအတော်လေးဒုက္ခတာဝန်ရှိနိုင်ပါသည် extract နိုင်ပါတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် Hadoop လက်မှတ်လွန်သွားသူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအလွယ်တကူရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Hadoop မူဘောင်ဟာတစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းရက်သတ္တပတ် ပို. ပို. သက်ဆိုင်ရာနှင့်တစ်လောကလုံးဖြစ်ခွင့်အလမ်းများနှင့်တစ်လရတဲ့အတိုင်း, ဤဒေသရှိအတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုသင်ဖို့အထူး၌များစွာသောအောင်မြင်မှုဖျောပွနိုငျသညျ။
Hadoop လေ့ကျင့်ရေးစင်တာများပတ်လည် Big Data စွမ်းရည်ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးရရှိနိုင်မည် Big Data Practitioner စေရန်ရည်ရွယ်သင်တို့ရှိသမျှပေးခြင်း။ လေ့ကျင့်ရေးဆင်းလက် MapReduce, HDFS, HBase, ဝက်, အုံ, Sqoop, Oozie နှင့်ဗိသုကာကိုင်တွယ်သည်အခြားအချက်အလက်များ၏လက်ခံခဲ့သည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ Hadoop လေ့ကျင့်ရေးသင်အပါအဝင်ဒေသများအတွက်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများနှင့်သင်ယူမှုပေး:
အဆိုပါ Hadoop 2x ဗိသုကာများ၏နားလည်မှု
အဆိုပါ Hadoop အုပ်စုတစ်စု၏ setup နှင့်စိတ်ကိုထူးခြားဆန်းကြယ်ပါတယ်မြေပုံမနုတ်အစီအစဉ်များသီကုံးရေးဖှဲ့
ကွဲပြားခြားနားသောဗိသုကာနှင့်မော်ဒယ်များအကြားအုံ, ဝက်နှင့်ချည်ခင်အသုံးချဖို့နေဖြင့်ဒေတာများ analytics အပေါ်စတင်
မြေပုံ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုလျှော့ချနှင့် H အခြေစိုက်စခန်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှု
Spark နှင့်၎င်း၏တစ်ခုလုံးကိုဇီဝစနစ်၏ RDD နားလည်မှုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်
အစစ်အမှန်ဘဝတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်တာကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေး။
နှောင်းပိုင်းတွင်လေ့လာမှုများကိုလည်း Hadoop ၏အရေးပါမှုကိုတစ်ဦး Big Data ကိုင်တွယ်မူဘောင်ရုံအနီးအနာဂတျမှာတိုးမြှင့်ဖို့သွားအဖြစ်ကဖော်ပြသည်။ အစီရင်ခံစာများ Hadoop စျေးကွက်ယခုနှစ်ရဲ့ 99.31 ကျော်မတိုင်မီန်းကျင် $ 2022 ဘီလီယံခန့်ဖြစ်မည်, မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ 42.1 န်းကျင်တစ်မှုနှုန်းမှာဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။
ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသင်ယူခြင်းနှင့် Hadoop ပိုလတ်ဆတ်အဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားအိုင်တီပညာရှင်များအဘို့အတန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာများ, ဗိသုကာ, စမ်းသပ်ခြင်း, BI, DDW နှင့်, ETL ပညာရှင်များအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသော data တွေကိုကိုင်တွယ်ခြင်းဆီသို့ဦးတည်သူတို့ကိုအသုံးချတတ်ရန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်း Hadoop လေ့ကျင့်ရေးအေဂျင်စီများ၏မာစတာသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးတူဆနျးစစျလိမျ့မညျ, သင်ထိထိရောက်ရောက်လက်မှတ်ရှောက်သွားသောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်, သင် Big Data နှင့် Hadoop လက်မှတ်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်မှတ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကြီးမားသောလက်ခံမှုကိုတန်ဖိုးထား။ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများနှင့် MNCs အတော်များများနာမည်ကျော်အွန်လိုင်းနည်းပြများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးရိုးအမြစ်များ၏လေ့ကျင့်ရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအ Wipro, Nokia Cisco သည်, Ford ကား, IBM ကနှင့်တူသောထည့်သွင်း။ သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်သင်၏အအောင်လက်မှတ်စစ်မှန်သည်နှင့်မြင့်မားသောကျော်ကြားမှုနှင့်လစာ၏သကျမှေးလုပျငနျးအားဖြင့်သင်တို့ကိုအလှဆင်ပါလိမ့်မည်စိတ်ချပါနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Hadoop လက်မှတ်နောက်ထပ်လုပ်ခတိုး, $ 98 ဋသို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းတစ်ဦးလစာနှင့်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်သင်တို့ကိုအရည်အချင်းပြည့်စေမည်။ အဲဒီမှာသင်တို့အဘို့ထက်ပိုမို 4.4 သန်းအဓိက data တွေကိုအလုပ်အကိုင်ယခုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖွင့်တံခါးများ 12% တစ်မှုနှုန်းမှာတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ Hadoop ဒီဇိုင်နာများကအကောင်းဆုံးနှင့်အချက်အလက်ယနေ့တည်ဆောက်ပြီးနောက်အများဆုံးကိုမြော်လင့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Skyline စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ယခု bandwagon join လို့ရပါတယ်။
အဆိုပါ Hadoop developer အင်တာဗျူးကွဲအက် - သင်သိပြုရန်ရှိသည်ဘာလဲ?
သငျသညျ R ကို, Python ကိုနှင့် Hadoop အကြောင်းသိထားသင့် 10 အရာ